Silver Wolf – Pann Satt Lann Books
ထူးဆန်းတဲ့ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်တွေကို သဘောကျသူတွေ သေချာပေါက် ဖတ်သင့်တဲ့ဆရာမ ‘Manie Khin’ ရဲ့ “Silver Wolf”
‘မုတ’ ဆိုတဲ့သူဟာ မွေးကတည်းက နိမိတ်တွေနဲ့ မွေးဖွားလာခဲ့ရတယ်။ ကောင်းကင်တစ်ခုလုံး အနီရောင်လွှမ်းမတတ် ကြယ်သစ်တစ်လုံး ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့် တိုင်းပြည်အသွယ်သွယ် အုတ်အော်သောင်းတင်း ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လေ။ အာဏာနဲ့ ပကာသနကိုမက်တဲ့ နတ်ဆရာကြီးရဲ့အဟောက သွေးနီကြယ်နဲ့ သွေးရောင်လွှမ်းစေမယ့်နိမိတ်တဲ့။
? အဲဒီအချိန်တုန်းက သူရဇ္ဇတိုင်းက အင်အားကြီးနိုင်ငံပေါ့။ သွေးနီကြယ်ရဲ့အရှင်သခင်ဟာ ဘုရင့်ထီးနန်းကိုပါ ထိပါးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ နတ်ဆရာကြီးရဲ့အဟောကြောင့် ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့တဲ့ဘုရင်ကြီးက မုတမွေးဖွားရာ မြောက်ပိုင်းမျိုးနွယ်စုကို တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်စေခဲ့တယ်။ မုတရဲ့ခမည်းတော်က မုတနဲ့မိသားစုကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ပြန်လည်ခုခံရင်း သမီးတော်လေးနဲ့ ညာလက်တစ်ဖက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။ မုတဟာ အသက်ဆက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက် ငယ်စဉ်ကတည်းက မိတကွဲ ဖတကွဲနဲ့ ပုန်းကွယ်ပြီး ပညာသင်ကြားခဲ့ရတယ်။ ကံဆိုးတာလား ကံကောင်းတာလားမသိ မုတအသက် ၁၈ နှစ်မှာပဲ သွေးကြယ်ဟာ တစ်ဖန်ပြန်လည်တောက်ပလာလေတော့ …
? သူရဇ္ဇဘုရင်လွှတ်လိုက်တဲ့ လုပ်ကြံသူတွေလက်ထဲကပြေးရင်း မုတ အဆိပ်မြားထိမှန်ခံလိုက်ရချိန် ကယ်တင်ပေးသွားတဲ့ သူက ‘အက္ခရ’။ မုတ ဒုက္ခရောက်တဲ့ အချိန်တိုင်းနီးပါးလိုလို အက္ခရနဲ့တွေ့ပြီး အက္ခရရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေကြားမှာ နှစ်ယောက်သား ရင်းနှီးမှုတွေပိုလာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် မုတ မသိတာက အက္ခရဟာ သူရဇ္ဇရတိုင်းက ဒုတိယမင်းသားတစ်ပါးဆိုတာပဲ။
? ငွေဖြူရောင်ဝံပုလွေမျိုးနွယ်စုရဲ့ နန်းလျာမင်းသားလေး မုတနဲ့ သူရဇ္ဇတိုင်း လူသားမျိုးနွယ်စုရဲ့ ဒုတိယမင်းသားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ အက္ခရ ! သူတို့နှစ်ဦးကြား ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမှာလဲ?
? မုတကရော သူသိပ်ခင်တွယ်ရတဲ့ အက္ခရက လက်စားချေရမယ့်ရန်သူရဲ့ သွေးရင်းချာမှန်း သိသွားမှာလား?
? အက္ခရကရော မုတဟာ သာမာန်လူမဟုတ်ဘဲ ဝံပုလွေတစ်ကောင်ဖြစ်မှန်းသိသွားရင် ဆက်ချစ်နိုင်ပါဦးမလား?
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး ထူးဆန်းတဲ့ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်တွေကို သဘောကျသူတွေ သေချာပေါက် ဖတ်သင့်တဲ့ BL Novel မို့ အခုပဲဖတ်လိုက်ကြဦးစို့!
ဝန်ဇင်းစာပေ 2021 ဇန်နဝါရီလ(ပ-အကြိမ်)
“Silver Wolf” စာအုပ်အပေါ် လူကြီးမင်း၏ အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်... Cancel reply
Manie Khin စာအုပ်များ